Mampiaraka avy ny anarana sy manambady any Portiogaly. Pirenena toetra ny zavatra Mampiaraka
Na bika sy tsy fototra mahatonga ny safidy ny mpiara-miasa, fa manosika ny maro ny ankizivavy ny mitandrina ny mombamomba ny zavatra ny olona. Ny amin’ny miseho ihany izy ireo toy ny Espaniola — mainty volo, tsara ny endriny ary nahasarika ny masoko, fa ny toetra kokoa voatokana, tsy mitabataba. Maro tamin’izy ireo ny fitiavana ski tastefully akanjo. Ny zavatra ny olona amin’ny fahazazana dia ampianarina mba hanaja ny vehivavy, ary mihatra amin’ireo tsy afa-tsy ny reny, ny vady. Misy vehivavy, na dia ny any am-piasana, amin’ny fitaterana na eny an-dalambe mahatsapa ny gallantry ny tatsimo.
Izy ireo tsy hahafantatra ny tenin ny vadiny, ary ny fitodihana any ny vadiny, izay midika hoe malala. Ny mpiray tanindrazana, dia vonona ny mamorona ny fianakaviana amin’ny teny portiogey ny olona. Any Eoropa izy ireo no heverina ho ny tsara indrindra amin’ny fianakaviany ny lehilahy. Izy ireo dia hanokana fotoana be dia be miaraka amin’ny fianakaviana, sy ny fitaizana ny ankizy. Ao ny raharaha ny nahaterahan ny zaza vao natao ny ray dia nomena dimy andro handao ka dia afaka ny hanampy ny vadiny amin’ny voalohany. Na dia eo aza ny fisaraham-panambadiana, ny zavatra hanampy sy handray anjara amin’ny fanabeazana ny zanany. Ao Portiogaly dia heverina ho ny asabotsy olona ny andro. Tamin’io andro io, ny olona dia mivory ao anaty trano fisotroana, izay mandany fotoana eo amin’ny resaka amin’ny iray vera Madeira. Iray hafa mahaliana ny fitsapan-kevitra rehetra ny anarana dia mpilalao baolina kitra. Ho azy ireo dia tsy misy fanatanjahan-tena — izany dia ny»finoany»amin’ny firenena.
Te hampifaly ny zavatra fitiavana baolina kitra
Amin’ny fankalazana ny fandresena tao amin’ny toerana tena ny ekipa nanao ny mahavariana ny fety, ary hita tanjona mitaraina izao tontolo izao.
Teny portiogey ny olona — mavesatra mpifoka sigara
Ny eoropeana fomba fiaina ara-pahasalamana indro tsy hiorim-paka ary Portiogaly, ary mbola mitana ny lohalaharana toerana ny isan’ny mpifoka sigara.
Portiogaly — toy ny kely faritanin’i Eoropa
Raha toa ka tsy mihaino ny zavatra toy ireo lalam-pirenena sy ny taranja Golf, dia azo atao ny mihevitra fa ny anarana no tsy niova hatramin’ny andro Magellan sy Vasco da Gama. Manao divay tena tsara, fa ny voaloboka mbola torotoro fo underfoot, dia manana toeram-pivarotana feno trondro, ary aleon’izy ireo hisambotra azy amin’ny tehina, toy ny teo aloha, dia ho velona ao amin’ireo fianakaviana maro — tanora ny fikarakarana ny zokiolona, ny fanabeazana ny zokiolona sy Zandriny rehetra eo ambanin’ny efitra lehibe iray
← Maimaim-poana Niaraka vehivavy tany ETAZONIA Niaraka
Ny lahatsary amin'ny chat ankizivavy roulette Archive antontan-taratasy →